AVI Free in MPEG Converter
> Resource > Free > Top 5 Best iyo Free AVI in MPEG converters
Haddii aad raadinayso hab fudud si loogu badalo files movie AVI aad galay file MPEG ah, ka dibna ha cabsanina. Si ka duwan laba sano ka hor, waxaad ka qaadan kartaa ogaaaday ee AVI cajiib ah oo lacag la'aan ah si ay u converters MPEG in daqiiqo oo kaliya dhowr ama seconds.
Dhab ahaantii, halkii ay muddo la soo xulay oo kaliya dhowr ah sida ka hor in oo dhan lacag, maanta aad leedahay aad u badan oo uu ka soo xusho! Si laguugu caawiyo inaad ka soo baxay, waxaan soo wada saaray liiska Top 5 Free AVI in MPEG converters.
Lagu qiimeeyo mid ka mid ah ugu kalsoonaan karo free video converters halkaas, Wondershare Video Converter sheegtay in ilaa 30x ka dhaqso badan wax converters kale halkaas. Si kastaba ha ahaatee, Converter gelayo uu wax badan ka badan oo kaliya qalabka diinta.
On top of diinta galay 158 qaabab kala duwan, waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa videos ka internetka si sahlan oo isku dubaridi file ah u doonaya kasta. Aad gubtid kartaa DVD isla adigoo isticmaalaya software ah, waxaad la siiyo fiican ah xirmo dhan-in-mid.
Taageerada Qaabka Broad
Beddelaan kala duwan badan ee HD iyo SD qaabab video: caadi HD qaab video sida HD TS, HD Mpg, HD wmv, MP4 HD, HD MKV, iwm; videos SD caanka ah sida AVI, MP4, MOV, wmv, MKV, Mpg, MPEG, H.264 iyo in ka badan.
Dhoofinta Audio ka MTS Video
Waraaqda files audio ka cajalado AVCHD oo waxaan iyaga ku badbaadin sida MP3, WMA, M4A, regelingen, daanyeer, FLAC, AAC, AC3, MKA, OGG, AIFF, RA, RAM, MPA.
In kor loo qaado Videos la Functions Edit Rich
Dallaga ku laayeen madow si shaashad buuxda, jar qayb aan la rabin, shaandheyn sideway videos, iyo ku milmaan dhowr videos galay mid ka mid ah hal, dalban qaar ka mid ah sawir ama qoraal oo xiiso leh watermark in ay sameeyaan waxa ay sii gaar ah iyo iminka.
Sii daayay sanadkii 2008, Dr. DivX waa Converter cajiib ah in uu leeyahay wax walba oo aad u baahan tahay si loogu badalo faylasha aad galay DivX qaab socon. Waxaa u bedeli karaan oo keliya ku saabsan nooc kasta oo file ka MPEG-1 iyo MPEG-2 in qaab MP4 ama MOV ah.
Waxaa si toos ah u abuuraa files kuwaas oo DivX socon oo waxay bixisaa taageero ah ee kuwan raadkaygay audio badan, taas oo ah mid aad dhif u ah Converter oo lacag la'aan ah. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in ay raacaan Wizard fudud ee la bixiyo iyo reserved goobaha ay ku salaysan heerka tayo aad raadinayso. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waxaa loo dooran heerka tayo ee loo baahan yahay iyo Dr. DivX soo bixi doona oo dhan oo ka mid ah isla'egyada adag!
Inkasta oo ay si weyn maanta loo isticmaalo, kombiyuutarada Mac ay weli wax badan oo kor u qaadaan in la sameeyo oo la xiriira waxaa freeware. iSquint, si kastaba ha ahaatee, u fuula, si gurmadka si ay u caawiyaan badalo videos waqti at dhan. The fudud jiitaa-iyo-hoos u dhac gui waxaa fud in ay isticmaalaan ka dhigaysa, iyo xitaa aad bedeli kartaa wax soo saarka iyo tayada ratio la bar slider ah.
Haddii aad ogtahay waxa aad samaynayso, aad furi kartaa qaybta 'Advanced' iyo run ahaantii qayb qaataan geedi socodka tafatir ah. iSquint qiyaas ahaan 5 jeer ka dhakhsi badan QuickTime Pro, iyo xamili karaan oo keliya wixii ku saabsan qaab video joogto ah. Waxaa cajiib ah, ka duwan si xor ah u QuickTime.
Created si gaar ah u Windows, dhismaha ah FFmpeg qalab diinta oo caan ah, qalab duug ah dugsiga amarka-line diinta, waa mid aad u awood badan. Waxaad u bedeli karaan qaabab video sida AVI, MKV, MOV, MP4, OGG, Jabbuuti, TP, wmv, iyo wax kasta oo kale oo aad ka xusuusan karto.
Waxay ka dhigaysa ilaa ay Aragtidan ay qabaan ee user saaxiibtimo adigoo aad u awood badan. Waxa ay taageertaa mid ka mid ah meelaha ubalaadhan of video iyo maqal ah codecs halkaas, oo ka shaqeeya soomi. Waa maxay waxa ay ka maqan xoog muuqaal, FFmpeg ka dhigaysa ilaa waayo, sheer xoog.
Clip Converter (Converter Online)
Converter web-ku salaysan Tani waa sida cabsi badan si deg deg ah wax loo qabto oo aan wax dhibaato agagaarka. Interface The fudud siinayaa saddexda doorasho ee audio iyo afar video aad. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa sidoo kale in ay geliyaan file ah, ama in ay aqbasho URL video galay bar lagu siiyey.
Tani online diinta warbaahinta qalab lacag la'aan ah waxaa fiican isagoo bookmarked, waa deg deg ah si ay u isticmaalaan, waxay taageertaa soo diyaariyeen ballaaran ama websites sida YouTube waana lacag la'aan ah si ay u isticmaalaan. Taas macnaheedu waa in aad kala soo bixi kartaa jecel aad video clips ka internetka si ay u muujiyaan saaxiibadaa si sahlan ama watch marka aad on go ah.
Shanta converters kor ku xusan qaar ka mid ah qalabka diinta video ugu kalsoonaan karo laga heli karo. Waxay bixiyaan muuqaalada in xitaa qaar ka mid ah dhigma Premium ma samayn, oo kulligood waa ka qiimo isku dayaya baxay!